Ciidamada Kenya oo Raadinaya hogaamiye iyo afar qof Oo ay gawrac kuxukumeen shabaab | Arrimaha Bulshada
Home News Ciidamada Kenya oo Raadinaya hogaamiye iyo afar qof Oo ay gawrac kuxukumeen shabaab
Ciidamada Kenya oo Raadinaya hogaamiye iyo afar qof Oo ay gawrac kuxukumeen shabaab
Thursday, January 18, 2018 News
Bulsha:- Saraakiisha amaanka Kenya ayaa sheegay in xabsi ay maamulaan Al-shabab ay kasoo baxsadeen 5-qof oo ka tirsaneyd Al-shabaab kuwaas oo u baxsaday dhinaca Kenya.
wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegay in ciidamadda dalkaas ay baadigoobayaan raglasheegay in ay kasoobaxsadeen xabsi ay gacanta kuhayaan kooxda alshabaab.
wararku waxa ay intaas kudarayaan in raga soobaxsaday ay yihiin ilaa shan qofood kuwaas oo ay kooxda alshabaab uqorsheysay in ay gowracaan Axmed Iman Cali oo ka mid ah ragga baxsadka ah.
shanta ruux ee lasheegay in ay kasoobaxsadeen alshabaab ayaa si dhumalaysi ah ku gaaray Kenya iyagoo rajo weyn ka qaba inay kaga badbadaan dagaalamayaasha Al-shabab.
kooxdan baxsadka waxaa hogaaminaya Axmed Iman oo kamid ah hogaamiyaasha Al-shabab ee shacabka Kenya ugu yeeri jiray inay ku biiraan bartamihii sanadkii tagay ee 2017kii.
Axmad ayaa ayaa isaga baxay Al-shabab kadib marki ay gowraceen dhowr dhalinyaro oo Kenyan ah oo ay ku eedeyen inay basaasnimo iyo macluumadka sirta ah ee Al-shabab ay u gudbinayeen xukuumada Kenya.
shantaan qof ee ka baxsatay xabsiyada Al-shabab ayaa la tilmaamay inay kasoo jeedan magaalooyinka Lamu iyo Malindi waxana ay xirnaayen ilaa dhamadkii sanadkii tagay.
Warbixinada sirdoonka Kenya ay helaan ayaa muujinaya in dadka ugu badan ee Al-shabab ka tirsan lagu dhibaateeyo ay yihiin kuwa Kenya kasoo jeeda.
Muwadiniinta Kenyaanka ah ee Al-shabab ku jiray ee sanadkii lasoo dhaafay ay kooxda basaasnimo ku eedeysay kadibna gowraceen waxaa kamid ahaa Ardey horey wax uga bartay jaamacada Moi University Jared Mokaya Omambia, Faraj Abdulmajid, Ahmed Yusuf Hassan, Ahmed Nur Abdi Osoble, Abdullah Talal Musa, Hashim Othman Selali iyo kuwa kale.